MW CMC Oo Kulan Layeeshay Shaqaalaha Deegaanka - Cakaara News
MW CMC Oo Kulan Layeeshay Shaqaalaha Deegaanka
Jigjiga(CN) Talaado, 26ka January 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa galabta kulan lagu dar-dargalinayo qaab-shaqeedka guud ee shaqada layeeshay shaqaalaha heerarkiisa kaladuwan ee xafiisyada heer deegaan.
Hadaba, madaxwaynaha ayaa kalahadlay shaqaalaha inay ugu horayn ilaaliyaan saacadaha shaqada xiliyada galida iyo bixida labada nisba. Wuxuuna kudhiirigaliyay inay si kalsooni iyo daacadnimo kudheehan tahay ay shaqadooda iyo waajibaadka saaran uga soo baxaan. Waxaa kale oo uu u balan qaaday in cid kasta lagu qiimayn doono shaqada uu uhayo shacabka oo aysan iskumid ahaanaynin kawaajibaadkiisa siduu ahaa ugasoo baxa iyo cidaan kasoo bixin.
Sidoo kale, madaxwaynaha ayaa carabka kudhuftay inuu jiro form gacantaada isku qiimee ah sidii gacantaada iskumeeleedii loo sameeyay 7dii kun ee lashaqaalaysiinayay oo si cilmiyaysan u qoran darajooyin kaladuwana oo waxqabadka shaqsiga shaqaalaha ahna kusalaysan. Foomkaas oo horay ay buuxiyeen dhamaan golaha wasiiradu. Lehna gudi sare oo qiimaysa foomka labuuxiyay. Cid kasta oo shaqaale ahna ay buuxin doonto.
Ugudanbayna, shaqaalaha heerarkiisa kaladuwan ayaa si wayn usoo dhaweeyay arintaas iyagoo waliba balanqaaday inay waajibaadka saaran ay kasoo baxayaan oo ay waliba ilaashanayaan systemka dawladnimo ee ay fuliyeyaasha kayihiin.